Akwụkwọ niile nchịkọta njem ndị India niile | Kpọọ 91-993.702.7574
India Tour nchịkọta
Ị nwere ike ịkọwa India ọ bụghị dịka mba ma ọ bụ mmetụta. Anyị na-enye All India Tour Packages nke na-eme ka ị nwee ahụmahụ ahụ. Na-esi n'ugwu Himalayas na-asọpụta na ebe okpomọkụ nke Kerala. Ókèala ya ndị gbasaa gburugburu gụnyere ụdị ọdịdị, omenala na ndị mmadụ na-enweghị atụ. Sand Pebbles 'Ihe nchịkọta njem nile nke India na-ekpuchi ya niile. Na-aga n'okporo ámá nke obodo India ọbụla na ị ga-eso ndị nnọchianya nke ọtụtụ okpukpere chi nke ụwa, na-ezute ememe ụlọ nsọ ndị a rụrụ kemgbe oge ndị Fero Ijipt, yabasị-domed alakụba guzobere ọtụtụ narị afọ tupu Taj Mahal, Raja Britain na ihe ọ bụla. Site n'ugwu ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ị nwere ike ịnweta ahụmahụ a dị ịtụnanya na nchịkọta njem niile nke India. Maka ugha ya nile, ihe ngbaghara na nsogbu na-adighi ike, India na-abughi ebe di egwu. Mmiri nke ndụ na ndị ọbịa ya, ubiquitous Filmi Music, ga-atụgharị okwu nke mmadụ ole na ole nwere ike ichefu site na mgbe ha si n'ụgbọelu pụọ. Sand Pebbles 'Nchịkọta Njem Ntụta nile nke India na-eme ka o doo gị anya ịnye gị nlegharị anya India kasị mma ị nwere ike iche.
N'ime ihe karịrị 30,000 afọ nke akụkọ ntolite, a na-achịkwa ọchịchị dị iche iche na Alaeze tupu e guzobe ya dị ka mba na 20th century. India nwere ihe karịrị otu puku njem nleta na ọtụtụ saịtị World Heritage site. Nchịkọta Njem Njem India site na Sand Pebbles 'ma na-enwe ụsọ osimiri na-ekpo ọkụ na ihe ndị dị ebube na-eme ka ụlọ ọrụ ochie na nke oge ochie, nke ọ bụla dị iche iche nke India nyere ihe na-amasị onye ọ bụla. Site na nlegharị anya iji chọpụta akụkọ banyere Odisha ịgagharị Northeast India ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ maka njem njem njem ụwa, ndị ọrụ nleta na-ahụmahụ nke nnwere onwe anyị nwere ike ime ndokwa ọ bụla ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma. N'okpuru ebe a bụ ihe atụ nke ụfọdụ nchịkọta njem nlekọta ndị ọzọ na-ewu ewu, nke ọ bụla n'ime ha nwere ike ịhazi maka ịkwado ọdịmma nke otu ọ bụla.
Nchịkọta njem nchịkọta
Njem nke Odisha
Ijere ndị ahịa afọ ojuju ihe karịrị afọ iri na ise, Akpụkpọ ụkwụ Pebbles Sand onye oru nleta njem nleta na India mara ya dika ulo oru nlekọta njem nke na-enye ndi oru nleta onodu kacha elu ma nweta iru onu ogugu ndi mmadu. Bịanụ, hụ India na Sand Pebbles 'Holiday Tour packages India. Ọ ga-agbanwe ụzọ ị na-ahụ ụwa.
Mee atụmatụ na ezumike gị ọzọ na Odisha na ịchọgharị ebe nlebara anya na Sand Pebbles Tour N Njem
Puri Rath Yatra Tour ngwugwu - Ọnụ Ụzọ Ámá Eluigwe